Warar - Waa maxay waxyaabaha ka kooban iyo adeegsiga baaldi
Waa maxay waxyaabaha ka kooban iyo adeegsiga baaldi
Baaldi waxaa loola jeedaa xubin u eg baaldi oo loo isticmaalo in lagu qodo alaabta dabacsan sida carrada, ciidda jaalaha ah, dhagxaanta iyo qashinka dhismaha. Waxay ka kooban tahay saxanka hoose, saxanka derbiga, saxanka dhegta, saxanka dhegta, saxanka ilkaha, saxanka dhinaca, iyo ilkaha baaldiga. Waa nooc ka mid ah qalabka shaqada ee badanaa lagu rakibo qodista qodista. Waxyaabaha baaldi lagu qodayo Congqin waxaa loo qaybin karaa baaldiyo jeexan, baaldiyo shaashad ah, baaldiyo dhul-gariir ah, baaldiyo dhagax ah iyo baaldiyo miino.
Baaldiyadaha wax lagu qodo ayaa loo qaybiyaa baaldiyo caadi ah, baaldiyo la xoojiyay, iyo baaldiyo miino iyada oo la raacayo sifooyinka dhismaha.
Qalabka baaldi ee caadiga ah wuxuu ka samaysan yahay qaab-dhismeed tayo sare leh oo heer sare ah oo qaab dhismeedka birta Q345B ah. Astaamaha baaldi caadiga ah: aagga baaldi afka waa ka weyn yahay, wuxuuna leeyahay dusha sare oo is dulsaar, sidaas darteed wuxuu leeyahay cunsur buuxsamaysa oo sareysa; waxay badbaadinaysaa waqtiga shaqada waana mid hufan. Ku habboon bay'adaha shaqada fudud sida qodidda dhoobada guud iyo rarka ciidda, carrada iyo quruuruxa.
Baaldiga la xoojiyay ayaa la sameeyay oo lagu xoojiyay alaab bir ah oo u adkeysata dharka adag ee walbahaarka sare iyo qaybaha nugul ee ku saleysan baaldiyo caadiga ah; qaybaha nugul ee saxanka kursiga ilkaha iyo saxanka dhinaca daabku waxay ka samaysan yihiin qalab tayo sare leh oo tayo sare leh oo guryaha lagu xidho oo leysku adkeysto oo bir ah NM360, saxan adag, cimri dherer adeeg Dhaxal dhammaan faa'iidooyinka baaldiga caadiga ah isla markaana si weyn u hagaajiya xoogga iyo xirashada caabbinta. Deegaanka lagu dabaqi karo waa howlo culus sida qodista carrada adag, quruuruxa, rarka quruurux, iwm.
Kordhi saxanka xoojinta hoose ee baaldiga macdanta; kordhin saxanka ilaalada dhinaca; ku rakib saxanka difaaca, ku dheji naqshad laba geesood ah baaldiga hoostiisa si kor loogu qaado nadiifinta ciribta iyo yaraynta duugista; farqiga ayaa lagu hagaajin karaa isku xirnaanta usha Qalabka; isticmaal iswidishka HARDOX bir aad u xoog badan oo birta u adkeysata, taas oo dhowr jeer dheereysa nolosha alaabada; ilkaha baaldi waa ilko baaldi gaar ah dhagaxyada. Ka dhig badeecada mid lagu kalsoonaan karo, waxqabadka macdanta fiican, iyo mid dhaqaale badan. Deegaanka lagu dabaqi karo: Ka-soo-bixidda dhagax adag, dhagax adag oo adag iyo cimilo cimilo leh oo lagu qasay carro; hawlgallo culus sida rarida dhagaxa adag iyo macdanta qarxan.
Waqtiga dhejinta: Jun-03-2019